Magaalada Qardho oo gacanta u gashay ciidamada Cabdulahi Yusuf iyo Mohamed Xaaji Aden oo maxbuus ahaan loo qabsaday.
Wararka ka imaanaya deegaanka Qardho ayaa sheegaya ka dib markii dagaal aan weyneyn uu ka dhacay meel 12km u jirta magaalada Qardho dhinaca waqooyi ay u suurto gashay ciidanka Daraawiishta ee maamulka Col. Cabdulahi Yusuf in ay gacanta ku dhigeen magaalada Qardho oo xurun waayadaan dambe u ahayd maamulkii Jaamac Cali Jaamac.
Dagaalkaas ayaa la soo sheegayaa in 2 qof oo dhinaca Jamac Cali Jamac ah ay ku dhinteen, 1 ciidamada Cabdulahi Yusufna ku dhaawacmay, waxaa kaloo ciidamada Cabdulahi Yusuf gacanta ku dhigeen 7 maxaabiis ah oo uu ku jiro taliyihii ciidanka Jaamac Cali Jaamac aaga Qardho Mohamed Xaaji Aden oo mar ahaan jiray wasiirka Xanaanada Xoolaha ee maamulka Cabdulahi Yusuf, intaas ka horna madaxweyne ku xigeen ka ahaa Dawladii qayaaliga ahayd ee Salbalaar ee uu dhisay Gen Caydiid.
dagaalkaan iyo qabsashada magaalada Qardho ayaa waxay dabo joogtay dagaal ba'an oo asbuuc ka hor dhexmaray ciidamada Cabdulahi Yusuf iyo kuwa Jamac Cali Jamac, dagaalkaas oo aan wali si saxa loo ogayn qasaaruhuu geystay ayaa la rumaysan yahay inta la ogyahay in ay ku dhinteen dad ka badan 100 qof, Jamac Cali Jamac ayaa waxuu la leeyahay xiriir Dawlada Carta lagu soo dhisay oo kaalmo lacageed iyo mid hubeedba ugu deeqday halka Col. Cabdulahi Yusufna la leeyahay xiriir dhow Dawlada Itoobiya oo dad badani rumaysan yahay in ay leedahay danno iyo ujeedooyin gooniya ayna ku adeeganayaan Cabdulahi Yusuf.
Maxaa ku xiga Qabsashada magaalada Qardho?
Ka dib markii ay magaalada Qardho maanta gacanta u gashay ciidamada Daraawiishta ee maamulka Col. Cabdulahi Yusuf iyadoo aan wax dagaal ahi ka dhicin magaalada gudaheeda ayaa dad badani waxay isweydiinayaan maxaa ku xigi doona qabsashada Magaalada Qardho?
Sida aan la wada socono maanta aduunku meesha uu marayo cid xoog cid kale ku xukumi karta ma jirto, dadka ku nool deegaanka qardhoodna waxay si bareer ah ugu gacan seyreen maamulka col. Cabdulahi Yusuf, waxaan ogsoon nahay in dadka deegaaanka inta badan la marin habaabiyay oo shaqsiyaad ay ku adeeganayaan maamulka Carta ay qiyaamo u maleegeen, waxaan kaloo ognahay maanta meesha Maamulka Carta marayo, qayaanadii ay Puntland la raadinayeen in ay iyaga dib ugu noqotay, waxaan kaloo ognahay in maamul dimoqoraadiyad ku dhisan aan hal degmo burburin karin kana hor imaan karin rabitaanka ummada inteeda kale, waxaan kaloo ognahay in dadka reer Puntland ay yihiin dad ehel ah oo wada dhashay kuligoodna ka xun sida arini noqotay, intaas oo arimood oon soo sheegnay oo wada jira ayaa haddana waxaa maanta shacabka Puntland isha ku hayaan sida Col. Cabdulahi Yusuf u maamulo ugano gudbo dhibaatada ay keentay qilaafkaan siyaasadeed oo iminka sannad ka badan ka hurayay Puntland dhiig dad walaala ahna ku daatay. Waxaa haboon in maamulku u dhaga nuglaado waxyaabaha shacabku ka cabanayaan ama ha noqoto waxqabad la'aan ama ha noqoto musuqmaasuq amaba madax adayg iyo kaliyetalisnimo.
Magaalada Qardho ayaa ahayd saldhiga ciidamada Jamac Cali Jamac, qabsashadeeduna wiiqday awoodii ciidan ee maamulkii Jamac Cali balse xaqiiqdu waxay tahay qabshada Qardho aysan wax weyn soo kordhinayn siyaasad ahaan haddii aysan dhinac socon waan waan nabadeed iyo heshiis siyaasadeed oo ku dhisan isfaham, isafgarad, wada tashi iyo meel marinta danta guud, iyadoo aan marnaba la soo dhaweysaynayn dad aysan ku kalsoonayn dadka deegaanku kana qeyb qaadan karin maslaxada guud.
Waxaa iyana meesha ku jirta in maamulku bilaabo wacyi galin, lana tuso xaqiiqooyinka jira mujtamaca guud ahaan, sidoo kale ugu horeynba la guda galo sidii loo dhisi lahaa maamul ku meel gaara oo loo dhan yahay oo badala kan Col. Cabdulahi Yusuf ee iminka jira, sidii maamulka ku meelgaarka ahi u abaabuli lahaa doorashooyin xor ah lana qabto waqti cayiman, sidoo kale la soo celiyo doorkii Isimadii soo jireenkaahaa. arimahaas iyo kuwa kaloo badan maanta waxaa wax ka qabadkeeda laga sugayaa waa indheergaradka reer Puntland meel kasta ha joogeene iyo maamulka, iyadoo la sii marayo gudiyada nabada ee dhisan oo haddaba har iyo habeen ku jira sidii laa soo afjari lahaa qilaafka siyaasadeed una daadan dhiig dambe oo micno daro ah dadka walaalaha dhexdooda.